Iindlela ezikrelekrele zokusebenzisa uYouTube njengeQonga leNtengiso-YTpals
Ngokusebenzisa amandla othethathethwano kunye namandla okuguqula umxholo wevidiyo, unokuvula amandla amakhulu okuthengisa uphawu kuYouTube. Ukuba yinjini yokukhangela yesibini ngobukhulu, iqonga lokwabelana ngevidiyo likaGoogle linokukunceda wenze iibhrendi eziqhuba kakuhle kumaxesha azayo. Ngesicwangciso esicacileyo sokuthengisa seYouTube, ungabonisa uphawu lwakho phambi kwabantu abangaphezu kwebhiliyoni ezi-2 kwaye ube ngamanyathelo amaninzi phambi kwabakhuphisana nabo.
Nangona kunjalo, intengiso yeYouTube ngokuqinisekileyo ayisiyonxalenye yekhekhe, ngakumbi ukuba ungena nje emanzini amatsha okuthengisa ividiyo. Ukwenza, ukuqhuba, kunye nokwenza imali kwitshaneli yeYouTube kunokuba nengeniso enkulu, kodwa kufuneka wazi ezinye iindlela ezilumkileyo zokufumana ezona nzuzo ziphezulu kwintengiso yeYouTube. Ukuba uziva ungazi, makhe sikuthathe ngezinye zezi ndlela apha:
1. Lungiselela umxholo wevidiyo yakho
Enye indlela eqinisekileyo yokufumana okona kulungileyo kwintengiso yeYouTube kukukhathalela ubuchwephesha. Lungiselela iividiyo zakho ukuze zibonakale ngakumbi eqongeni ngokwenza izihloko zevidiyo ezithatha ingqalelo-ezo zihenda abantu ukuba bacofe kumxholo wakho. Uqwalaselo olubalulekileyo lokuphucula izihloko zevidiyo kukusetyenziswa kwamagama aphambili-amagama ophando afunwa ngabasebenzisi-kwisihloko sakho sevidiyo kunye nenkcazo yevidiyo. Kwakhona, kubalulekile ukwenza izihloko ezimfutshane ezinobuninzi bamagama angama-60. Izihloko zevidiyo yakho kunye nenkcazo kufuneka icace kwaye icace kwaye kufuneka inike ababukeli isizathu sokubukela umxholo wakho.
2. Lungiselela i-thumbnails
Ngaphandle kwezihloko zevidiyo kunye nenkcazo yevidiyo, i-thumbnail yomxholo wevidiyo yakho inefuthe elikhulu kwireyithi yokucofa (CTR). Iingcali zentengiso zikaYouTube zigxininisa amaxesha ngamaxesha ukuba iividiyo kufuneka zibe nezithonjana ezisebenzayo zokuseta kunye nokucacisa oko kulindelwe ngababukeli. Izithonjana zakho kufuneka zivuse umdla wababukeli bakho, zibagcwalise ngokumangala malunga nokuba kwenzeka ntoni na kwividiyo yakho. Unokusebenzisa iPhotoshop okanye izixhobo zokuhlela ividiyo ukwenza ngokwezifiso izithonjana zakho. Xa ii-thumbnails zevidiyo yakho zivuselela iimvakalelo kwaye zibalise ibali, umxholo wakho wevidiyo unokufumana iimbono ezinomtsalane.
3. Namathela kubude obufanelekileyo
Icebiso elilandelayo lokusebenzisa iYouTube njengeqonga lokuthengisa liya kuba kukwandisa ubude bomxholo wakho wevidiyo. Ukusukela ukuzibandakanya okuphezulu, iingcali zentengiso yeYouTube zigxile kwixesha elipheleleyo lokubukela iividiyo zabo. Ngokufanelekileyo, ubude bomxholo wakho wevidiyo akufuneki budlule kwimizuzu emi-5. Oku, nangona kunjalo, kuxhomekeke kuhlobo kunye nohlobo lomxholo owupapashayo. Ngelixa kungekho mgaqo unzima kwaye ukhawulezayo, unokuzama ubude bevidiyo ukufikelela kwindawo apho isitishi sakho siqhuba ukuzibandakanya okukhulu. Nokuba yintoni na, kufuneka ugxile ekudaleni iividiyo ezikumgangatho ophezulu kwaye uzenze zibe nolwazi, zimfutshane, kwaye zinomdla.
4. Hamba kwintlalontle
Ukunyuswa kweqonga elinqamlezayo kunokunceda kakhulu isicwangciso sakho sokuthengisa seYouTube. Ukwandisa ukufikelela kwijelo lakho likaYouTube, kuya kufuneka ubekhona kumaqonga apho asebenza kakhulu. Injongo kukubeka umxholo wakho wevidiyo phambili phambi kwabo. Unokwenza oku ngokungena kwiinethiwekhi ezahlukeneyo zemidiya yoluntu-nokuba yiFacebook, Twitter, Instagram, okanye LinkedIn. Abathengisi be-Savvy bayalazi ixabiso loluntu lwemidiya yoluntu kunye namaqela kwihlabathi lanamhlanje lentengiso. Ezi ziindawo apho isitishi sakho seYouTube sinokufumana utsalo oluninzi. Ukuba wabelana ngeevidiyo zakho kula matshaneli, ngokuqinisekileyo uya kwandisa ukufikelela kwakho kwaye uthathe isitishi sakho phezulu.
Ezi ngongoma zikhankanywe ngasentla zimbalwa kwiindlela ezininzi onokuthi uhambe ngazo malunga nokuthengisa kweYouTube kwaye ukhulule amandla amakhulu okwenza ingeniso yeqonga. Kubalulekile ukuba ucinge ngokuyilayo ngelixa usebenzisa ezi ngcebiso. Ukuba unqwenela ukwenza njalo thenga ukuthanda kweYouTube, ababhalisile, kunye nezimvo, ungakhetha YTpals, iqonga elinokukhulisa itshaneli yakho yeYouTube.
Iindlela ezikrelekrele zokusebenzisa iYouTube njengeQonga leNtengiso ngababhali beYTpals, 16 May 2022
Isikhokelo seCrisp kunye nesiKhokelo sokuYila iiThombiso zikaYouTube
Nje ukuba iakhawunti yakho ye-YouTube iqinisekiswe ngempumelelo, uya kuba nenkululeko yokongeza iithonjana zesiko kuzo zonke iividiyo zakho. Izithonjana zezinto zokuqala ezibonwa ngabasebenzisi bakaYouTube xa bekhangela iividiyo abangathanda ukuzenza…
Nangona kunokubonakala ngathi sisigqibo esingenamsebenzi ekuqaleni, ukwenza isigqibo ngesikimu sombala esilungileyo kwijelo lakho likaYouTube kubalulekile ekuqinisekiseni impumelelo yakho eqongeni. Imibala yaziwa ngokuba nefuthe elimandla...
Ngaba ifomathi eNtsha yokuThengisa ngeVidiyo yeYouTube iya kunceda ukuKhangela umdlalo wabo?
Iphulo likaYouTube kwintengiso evakalayo Njengevidiyo, intengiso yeaudiyo ikwangumbandela wentengiso kwihlabathi lanamhlanje. I-YouTube, iqonga lokuya ebantwini lokusasaza iividiyo zento ephantsi kwelanga, ngoku…